Zvizvarwa zveAfrica zvevanhukadzi - afrikhepri nheyo
kugashira Kategori VAFARIDZI VAFRICA
Gadzirisazve kuzivikanwa kweAfrica panheyo dzeAfrica
Ama Mazama, anomuAfrica-weCaribbean wedunhu reGuadeloupe, akawana hunyanzvi hwechiremba mumitauro muna 1987 paSorbonne Nouvelle University. Iye anozivikanwa semubatsiri ane simba we ...
Mukadzi ane simba kwazvo muKama nhoroondo
Amanishakheto yakanyorwa nemavara egoridhe mutsika refu yevarwi yeNubia (Sudan). Rudzi urwu rwakazvara rweFarao Egypt uye rwakaichengetedza kubva pakupinda kwekunze panguva ye ...
Nzvimbo yevakadzi vatema muAfrica yekare
Nekunyatsoongorora, mufananidzo uye chinzvimbo chevakadzi vatema munharaunda dzekare dzeAfrica kwete pasi pesimba rekunze, tinoona kuti ivo vanozivikanwa se ...
African warrior women on the battlefield facing facing colonization
Mhare dzevaIjipita Mambokadzi Mambokadzi ehondo eEjipitori aive Ahotep, uye Arsinoe II & III, uye vese avo vaive vazukuru veRoyal House yeKush. Vakatonga Egypt uye vakaraira mauto avo nezvikepe zvengarava panguva yehupenyu hweRoma. Muizvi...
Hurukuro naWinnie Mandela
Kana Mandela apinda mutirongo, akange ari wechidiki anotyisa achinja. Uye tarisa murume akabuda. Kumhuri yangu, zita raMandela rinoremerwa ...
Mukadzi weIvory anogadzira Yswara, chigadzirwa chemafuta chinodhaka che 100% yeAfrica chai
Swaady Martin-Leke, aimbova director weGeneral Electric kumaodzanyemba kweSahara, anovhura chaihwo chairesi yake yetiye, Yswara. Boutique yekutanga inotanga munaAugust 6 muJohannesburg. Just ...
Aminata Traoré anopindira kumapurogiramu echiFrench kuMali neCentral Africa
Rimwe gore mushure mekutanga kwekupindira kweVashandi, munyori uye wezvematongerwo enyika Aminata Traoré akaitisa "maminetsi makumi maviri" kupindira kweFrance kuMali neCentral African Republic. Aminata Traoré, aimbova gurukota ...
New Orleans (Louisiana) yaive imwe yenzvimbo dzakakwirira dzechitendero cheVodou muUnited States. Vodou yakavambwa muNew Orleans pakutanga kwezana ramakore reXNUMX, yakaunzwa nevaranda ...
South Africa inova mukadzi wekutanga wekuAfrica kuumba ndege
Muzvinabhizimusi weSouth Africa Siza Mzimela anova mukadzi wekutanga muAfrica kuvhura nendege nekugadzirwa kweFly Blue Crane. Sachigaro uye CEO weSouth African Airways (SAA) kubvira ...
Njeri Rionge, mukadzi uyo akaunza internet kune varombo
Wakatove muna 2011, magazini yeAmerican Forbes, nyanzvi munyaya dzebudiriro, yakapa mukombe kune uyu mukadzi anoshamisa, "akabudirira muzvinabhizimusi muAfrica". Nyaya ye ...
Mambokadzi Zingha weAngola, anopokana neColombia
Mambokadzi Zingha (Jingha) weAngola akaratidzira nhoroondo yekusunungurwa kwemadzimai eAfrica nguva yavo isati yasvika, vasati vasvika vevaPortugal makoloni muvatema Africa. Anna Zingha ndiye aive mambokadzi wekupedzisira ...
Lupita Nyong'o akavhotera mukadzi akanaka kwazvo munyika nevanhu magazini
Achibvunzwa naAmai Figaro, Lupita Nyong'o anoyeuka achishamiswa apo akavhoterwa mukadzi akanaka kwazvo pasi rose neBantu magazine gore rapfuura. Kukwira kwaLupita Nyong'o ...
Ranavalona III: mambokadzi wokupedzisira weMadagascar
Akazvarwa munaNovember 22, 1861 muAmparibe (zita rekare reguta guru: Antananarivo) Princess Razafindrahety anozivikanwa saMambokadzi Ranavalona III aive mambokadzi wekupedzisira we ...
Page 1 pamusoro 5 1 2 ... 5 zvinotevera